Qalabka ugu Fiican Suuqgeynta Emailka Woocommerce
Isniin, Oktoobar 26, 2020 Isniin, Oktoobar 26, 2020 Sheryl Jones
Woocommerce waa midka ugu caansan uguna doodi kara mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan eCommerce ee loogu talagalay WordPress. Waa qalab bilaash ah oo fudud oo toos ah in la dejiyo loona isticmaalo. Shaki la'aan habka ugu wanaagsan ee loogu rogo boggaaga WordPress-ka ah dukaan ganacsi e-commerce oo si buuxda u shaqeynaya! Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho oo aad u haysato macaamiisha, waxaad u baahan tahay in ka badan dukaanka eCommerce ee adag. Waxaad ubaahantahay istiraatiijiyad suuq geyn emayl xoogan si aad uhesho macaamiisha oo aad ugu rogto
Shalay, waxaan sameeyay fadhi kaligiis ah oo ka socda Suuq-geynta Warbaahinta Dunida oo loogu magac daray Sida Loogu Bedelo Soo Raacayaasha Raacaya ee Soo Saaraya Natiijooyinka Warbaahinta Bulshada. Anigu had iyo jeer waxaan ahay mid ka soo horjeeda talada had iyo jeer ku riixda warshadan xitaa xitaa ku tiirsan muranka. Qiyaasta dhabta ah ayaa ah in ganacsiyada ay sii wadaan inay raadiyaan taageere iyo kororka raacitaanka warbaahinta bulshada - laakiin waxay qabtaan shaqo aad u xun oo ah beddelashada dhagaystayaasha cajiibka ah.
Macno malahan haddii aad shaqaalaysid wakaaladda suuq geynta emaylka ama hibada guriga; Tilmaamahan ayaa kaa caawin doona inaad qiimeyso dadaalkaaga hadda iyo inaad ka hesho qiimo badan suuqgeynta emaylkaaga.